F० प्रार्थना पोइन्टहरू आध्यात्मिक फलहरूको प्रकटको लागि प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स F० प्रार्थना पोइन्टहरू आध्यात्मिक फलहरूको प्रकटको लागि
गलाती :5:२२ तर आत्माको फल प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्यता, कोमलता, भलाइ, विश्वास हो, :22:२:5 नम्रता, संयम: यस्ता बिरूद्ध कुनै कानून छैन।
आत्मिक फल आत्माको फल हुन् जुन आत्मा द्वारा उत्पादित हुन्छन् पवित्र आत्मा हामीमा आत्माको फल भनेको हाम्रो धार्मिकताको जरा हो। यो धर्मी व्यक्तिलाई धर्मी फलहरू लिनको लागि लिन्छ। आत्माका फलहरू ती गुणहरू हुन् जुन हामीबाट बहन्छन् जसले भन्छ कि हामी परमेश्वरका बालकहरू हौं। आज हामी आत्मिक वरदानहरूको प्रदर्शनको लागि for० प्रार्थना बिन्दुहरू हेर्नेछौं। यस प्रार्थना पोइन्टहरूले तपाईंलाई परमेश्वरसामु मात्र होइन, तर मानिस समक्ष पनि धार्मिकता प्रकट गर्न शक्ति प्रदान गर्दछ।
आध्यात्मिक उपहार र आध्यात्मिक फलहरू बीच भिन्न
आध्यात्मिक उपहार पवित्र आत्माको सम्पत्ति हो, ती अनुग्रहको चुनावी ईश्वरीय चुनौतिहरू द्वारा अनियमित रूपमा दिइन्छ। तपाईं आफ्नो रुचि को कुनै पनि आध्यात्मिक उपहार चाहना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आध्यात्मिक उपहारहरूको लागि काम गर्नुहुन्न, तपाईं केवल विश्वासद्वारा तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ र अनुग्रहले तपाईंलाई उनीहरू प्रकट गर्न शक्ति दिन्छ। आध्यात्मिक वरदानको उद्देश्य प्रचारप्रसार र सुसमाचारको विस्तारको लागि हो। अर्कोतर्फ आध्यात्मिक फलहरू धार्मिकताका फलहरू हुन् वा हामीमा ख्रीष्टको अनुग्रहको फलहरू। जबकि उपहारले अरूलाई आशिष् दिन मद्दत गर्दछ, फलले देखाउँदछ कि हामी वास्तवमै परमेश्वरका सन्तानहरू हौं। यसलाई अझ राम्रोसँग वर्णन गर्न, एक ईसाई आत्माको वरदान प्रकट गर्दैछ र अझै पनि पापमा बसिरहेछ। उदाहरण को लागी कसैसँग अगमवाणी को उपहार हुन सक्छ र अझै पनि उनको हृदय मा घृणा शरण गर्दै। आत्माका फलहरू परमेश्वरसँगको हाम्रो व्यक्तिगत कामका लागि हाम्रो लागि प्रासंगिक छन्। कुनै पनि विश्वासीले उपहारहरू प्रकट गर्न सक्छन्, यसको अनुग्रहबाट, तर केवल परिपक्व इसाईहरूले आत्माको फलहरू प्रकट गर्दछन्। उपहारको लागि मात्र लालसा नगर्नुहोस्, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा आत्माहरूको फलको लागि लालसा गर्नुहोस्। आत्मिक फलहरूको अभिव्यक्तिका लागि यी प्रार्थना पोइन्टहरूले तपाईंलाई तपाईंको दैनिक जीवनमा आत्माको फलहरू प्रदर्शन गर्न शक्ति दिन्छ। तिनीहरूलाई विश्वासका साथ प्रार्थना गर्नुहोस् र धन्यका होऊन्।
१. पिता, म तिमीलाई येशूको नाममा पवित्र आत्माको फलहरूको लागि धन्यवाद दिन्छु
२. बुबाले तपाईको कृपाका लागि धन्यबाद दिनुहुन्छ जसले मलाई होलीस्पीरिटका फलहरू प्रदर्शन गर्न मद्दत गरेको छ
Dear. प्रिय होलीस्पिरिटले आजै येशूको नाममा मलाई भर्दछ।
Oh. हे प्रभु, मलाई येशूको नाममा आत्मिक फलहरू प्रकट गर्न शक्ति दिनुहुन्छ।
I. म येशूको नाममा आध्यात्मिक फलहरू प्रकट गर्न ताजा अनुग्रह प्राप्त गर्दछु
Dear. प्रिय पवित्र आत्मा, येशूको नाममा भएको प्रेमको आत्मिक फलको साथ मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्
Dear. प्रिय पवित्र आत्मा, येशूको नाममा आनन्दित भएको आध्यात्मिक फलको साथ मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्
Dear. प्रिय पवित्र आत्मा, येशूको नाममा शान्तिको आध्यात्मिक फलबाट मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्
Dear। प्रिय पवित्र आत्मा, येशूको नाममा धीरज वा धैर्यको आध्यात्मिक फलको साथ मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्
१०. प्रिय पवित्र आत्मा, येशूको नाममा मलाई नम्रताको आध्यात्मिक फलले बप्‍तिस्मा दिनुहोस्
११. प्रिय पवित्र आत्मा, मलाई येशूको नाममा भलाइको आध्यात्मिक फलको साथ बप्तिस्मा
१२. प्रिय पवित्र आत्मा, येशूको नाममा विश्वासको आत्मिक फलको साथ मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्
१ Holy. प्रिय पवित्र आत्मा, येशूको नाममा नम्रताको आध्यात्मिक फलले मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्
१ Holy. प्रिय पवित्र आत्मा, येशूको नाममा मलाई संयमको आध्यात्मिक फलको साथ बप्‍तिस्मा दिनुहोस्।
Holy 24 पवित्र आत्मा, ममाथि हिर्काउनुहोस्, कि येशूको नाममा पापले ममा कुनै ठाउँ पाउने थिएन।
Holy 26. प्रिय पवित्र आत्मा, येशूको नाममा मेरो जीवनमा तपाईंको प्रकट उपस्थिति प्रदर्शन गर्न जारी राख्नुहोस्
Feet 28. मेरा खुट्टाहरू बिजुलीको गर्जनमा परिणत होऊन्, जसरी म उनीहरूलाई मोहर लगाउँछु। तिनीहरू येशूको नाममा शत्रुलाई बहिरा होऊन्।
अघिल्लो लेखमाG० प्रार्थना पोष्टहरू आध्यात्मिक उपहारहरूको प्रकटको लागि
अर्को लेखमाFinancial१ चमत्कार प्रार्थनाहरू आर्थिक सहयोगको लागि
अल्टर सफा गर्नको लागि प्रार्थनाहरू
बाइबल पदहरू पश्‍चात्तापको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
आनन्दको लागि प्रार्थना अंकहरू
फेब्रुअरी 18, 2021
२ m mfm प्रार्थना खुल्ला आकाश को लागी